ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဘိုကလေးမြို.နယ်မှ ကိုမှတ်ကြီး၏ ပေးစာ
Beranda » ဘိုကလေးမြို. သတင်းများ » ပြည်သူ.ထံမှပေးစာ » သတင်းများစုစည်းမှု » ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဘိုကလေးမြို.နယ်မှ ကိုမှတ်ကြီး၏ ပေးစာ
Ditulis oleh: Unknown - Tuesday, November 12, 2013
ကျွန်တော်တို့၏ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဘိုကလေးမြို့တွင် နှစ်စဉ် နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားများအားမြို.တွင်းသို့လှည့်လည်အပူဇော်ခံပွဲတော်ကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်လျှက်ရှိပါသည်။သို့ရာတွင် ယခုနှစ်တွင် ဘိုကလေးမြို. ၊မြို့မ (၇) ရပ်ကွက်၊၁၈လမ်းတတိယဖြတ်တာတွင်နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူသောဘုရားများ
(၁၇)လမ်းတွင်တည်ရှိသည့် အောင်ချမ်းအေး ဘော်ဒါဆောင်များ ၏ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များမှာ
မဏ္ဍပ်အတွင်းသို့ တစ်ဝက်ခန့်ဝင်ရောက်နေသည်မှာ (ပုံတွင်ကြည့်ပါရန်)လွန်စွာ အကျည်းတန်လှပါသည်။
ထို့ကြောင့် ယခုဖြစ်စဉ်အား စည်ပင်မှ အထက်လူကြီး နှင့်တကွ သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများ သိရှိပြီး လိုအပ်သလိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန် နောက်ဆုံးရ သတင်းများ မှတစ်ဆင့်တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
ဘိုကလေး သတင်းများအား ဒီနေရာ တွင် စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။ဘိုကလေးမြို.နှင့် ပတ်သက်သောသတင်းများအပြင် အခြားဒေသမှအဖြစ်အပျက်များအား ဖော်ပြလိုပါက သတင်းဓာတ်ပုံနှင့် တကွ sharponetawmintharlay09@gmail.com သို့ email ဖြင့်ဖြစ်စေ http://www.facebook.com/internationalnewsofworld သို့ဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါကြောင်း။။။။။။။။။။။
ပေးပို.သူ -ကိုမှတ်ကြီး (၁၈)လမ်း၊ ဘိုကလေးမြို.
Facebook Page : နောက်ဆုံးရ သတင်းများ
0 comments "ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံခရိုင်၊ဘိုကလေးမြို.နယ်မှ ကိုမှတ်ကြီး၏ ပေးစာ", Baca atau Masukkan Komentar